भर्खरै मात्रै आईपीओ निष्कासन गरेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा २ गुणा बढ्यो
मंसिर ४, काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २ गुणा वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले गतआवको पहिलो त्रैमासमा रू. ७४ लाख ६३ हजार मुनाफा आर्जन गरेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वृद्धि भएर रू. १ करोड ५६ लाख पुगेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानी ११३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ३८ लाख आम्दानी गरेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २ करोड ९६ लाख पुगेको हो ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १२ करोड २५ लाखभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ३७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८ दशमलव ९५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव १२ रहेको छ ।